Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.4.2 PhotoCity
PhotoCity mamaha ny tahirin-kevitra tsara sy ny santionany olana ao nizara fanangonana antontan'isa.
Vohikala toy ny Flickr sy Facebook hanampy ny olona mba hizara sary amin'ny namana sy ny fianakaviana, fa be koa ny mamorona repositories ny sary izay azo ampiasaina ho an'ny tanjona hafa. Ohatra, Agarwal et al. (2011) miezaka mba hampiasa ireo sary mba "Build Roma tamin'ny andro" amin'ny alalan'ny fampiasana 150.000 sary Roma mba hamoronana ny 3D fanarenana ao an-tanàna. Fa mpizaha tany tranonkala toy ny Coliseum nisy sary ampy amin'ny aterineto mba hamokatra 3D modely (Sary 5.10), fa ny toetra ireo ihany ny fananganana ireo noho ny zava-misy ny ankamaroan'ny sary dia nalaina avy amin'ny fomba fijery malaza ihany, namela ampahany ny trano unphotographed. Ankoatra izany, ny ankamaroan'ny faritra ao an-tanàna, fa tsy ampy ny sary no misy. Noho izany, amin'ny fampiasana ny nahita angona avy amin'ny sary repositories, dia tsy azo atao mahary rehetra Roma. Fa, ahoana raha azo nirotsaka mpiasa an-tsitrapo mba hanangona ny ilaina sary mba tena "Build Roma indray andro"?
Sary 5.10: A 3-D fanorenana indray ny Coliseum avy lehibe napetraka ny 2-D sary avy ao amin'ny tetikasa "Fanorenana Roma ao ny andro". Ny triangles dia maneho ny toerana izay ny sary nalaina (Agarwal et al. 2011) .
Mba hahatonga ny lasibatra fanangonana ny maro be ny sary, sy ny mpiara-miasa Kathleen Tuite Nanjary PhotoCity, sary-fanatsofohanao sary lalao. Lafiny tsara tarehy iray ny PhotoCity dia fa niova ny mety asa mafy ny fanangonana antontan'isa-fanatsofohanao sary sary-an-lalao-toy ny asa momba ekipa, fiarovana sy saina (Sary 5.11). Ny famolavolana ny PhotoCity koa ski mamaha ny santionany sy ny angona kalitaon'ny zava-tsarotra ny eBird sy ny hafa nizara tetikasa fanangonana antontan'isa.
Sary 5,11: PhotoCity nampody ny mety asa mafy ny fanangonana tahirin-kevitra (izany hoe, nampakaranao sary) ary dia nitodika azy ho lalao (Tuite et al. 2011) .
PhotoCity voalohany napetraka mba hahafahan'ny ny 3D fanorenana indray ny roa anjerimanontolo: Cornell University sy University of Washington. Players amin'ny fonenan'ny mpianatra tsirairay afaka nandinika ny amin'izao fotoana izao ny fanarenana toe-modely ny fonenan'ny mpianatra. Avy eo, dia afaka mahazo hevitra amin'ny alalan'ny nampakaranao sary izay hanitatra ny modely amin'izao fotoana izao. Ohatra, raha ny amin'izao fotoana izao ny modely Uris Library (amin'ny Cornell) Tena patchy, ny mpilalao mety hahazoana hevitra amin'ny alalan'ny vaovao nampakaranao sary izany. Manakiana, ny sary izay nampakatra-misy dia tsy maintsy hifanindry amin'ny sary mba hahafahany ho nampanan-kery, sy ny isan'ny hevitra ny mpilalao nahazo dia mifototra amin'ny ny vola fa ny sary manampy ny amin'izao fotoana izao modely. Tamin'ny farany, ny mpikaroka dia afaka mampiasa ireo sary mba hamoronana nampakatra ambony 3D vahaolana modely ny trano eo amin'ny samy campus (Sary 5.12).
Sary 5.12: Ny lalao PhotoCity afaka mpikaroka sy ny mpandray anjara mba hamoronana avo-tsara ny trano modely 3D mampiasa sary nakarin'ny mpandray anjara (Tuite et al. 2011) .
Ny famolavolana ny PhotoCity ski mamaha olana roa: tahirin-kevitra fankatoavana sy ny santionany. Voalohany, sary ireo no nampanan-kery ny mitovy azy ireo hamely teo aloha sary izay kosa mifanentana amin'ny sary teo aloha ny lalana rehetra niverina ho any amin'ny voa sary izay nakarin'i mpikaroka. Amin'ny teny hafa, noho izany nanorina-in leon'ny, dia tena sarotra ny rafitra mba hanaiky ratsy angona. Faharoa, ny scoring rafitra voajanahary mampianatra mpandray anjara mba hanangona ny sarobidy indrindra, fa tsy ny tena mora-tahirin-kevitra. Raha ny marina, eto ny sasany amin'ireo tetika izay mpilalao voalaza mampiasa mba hahazoana bebe kokoa hevitra, izay mitovy amin'ny fanangonana tahirin-kevitra sarobidy kokoa (Tuite et al. 2011) :
"[I niezaka] manakaiky ny andro ny andro sy ny jiro izay sary vitsivitsy nalaina; izany dia manampy amin'ny fisorohana fandavan 'ny lalao. Dia nanao hoe: andro rahona dia ny tsara indrindra amin'ny lavitra, rehefa mifandray amin'ny zorony, satria tsy nanampy kosa ny lalao endrika ny rafitsary avy ny sary. "
"Ary rehefa izany talaky masoandro, dia nampiasa ny fakan-tsary ny endri-javatra manohitra ny mihorohoro mba hamela ny tenako mba haka sary raha mandeha manodidina ny faritra manokana. Izany dia namela ahy mba haka sary miavaka raha tsy manana ny hampitsahatra ny ezaka. Koa tombony: tsy ny olona nibanjina ahy! "
"Fandraisana maro sary iray trano tamin'ny 5 megapixel fakan-tsary, an-trano avy eo dia tonga ny hanaiky, indraindray hatramin'ny 5 Gigs amin'ny faran'ny herinandro tsimoka, dia Kilonga sary fàfana paikady. Mikarakara sary ao amin'ny lahatahiry fiara ivelany mafy amin'ny faritra fonenan'ny mpianatra, fanorenana, dia nanome face ny trano tsara ho mpanome endrika fampidiram-pejy ambaratongam-pahefana. "
Ireo fanambarana avy amin'ny mpandray anjara mampiseho fa rehefa mety izy ireo nanome hevitra, dia mety ho lasa tena manam-pahaizana amin'ny fanangonana tahirin-kevitra mahaliana ny mpikaroka.
Amin'ny ankapobeny, ny tetikasa PhotoCity fa santionany sy ny tahirin-kevitra tsara dia tsy hay resena olana eo amin'ny fitsinjarana fanangonana antontan'isa. Koa, dia mampiseho fa nizara tetikasa fanangonana antontan'isa Tsy voafetra ny asa ny olona dia efa manao ihany, toy ny mijery vorona. Miaraka amin'ny tsara endrika, mpilatsaka an-tsitrapo dia azo Nampirisihina hanao zavatra hafa koa.